Ota atao amin’ny Fanahy Masina
Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe : hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra ;fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina » Mat. 12 :31
Ho an’ireo olona izay efa nanana fahazavana, nanana tombontsa, nahazo fampitandremana sy nanaovana fitalahoana, ho an’ireo olona izay tsy mbola niezaka nanolotra ny tenany manontolo ho an’Andriamanitra no ilazako ireo andalan-tsoratra ireo. Mampitandrina anareo aho mba hanananareo tahotra, sao ianareo manota amin’ny Fanahy Masina, ka havela amin’ny herin’ny tenanareo eo amin’ny toerana misy anareo , hilentika ao anatin’ny fitsilamodamohana sy tprimaso lalina ara-môraly, ary tsy hahazo famelankeloka velively. Nahoana no avelanao hobehazin’ny sekolin’i Satana mandritra ny fotoana maharitra ny tenanao, ary avelanao hanao zavtra izay tsy ahafahanao mibebaka sy manao fanavaozana ? Nahoana no toherinao ny fisokafan’ny famindrampo ? Nahoana ianao no miteny hoe : « avelao amin’izao ihany aho », mandra-pahatongan’ny fotoana , voatery tsy maintsy hanomezan’Andriamanitra anao izay zavatra irinao, satria ho azonao izany ?
Mieritreritra ireo olona manohitra ny Fanahin’Andriamanitra fa indray andro, any aoriana any, hibebaka ihany izy ireo, rehefa vonona ny hanao dingana ho amin’ny fanavaozana ; kanefa tsy ho takatry ny herin’izy ireo ny fibebahana amin’izay fotoana izay. Arakaraka ny fahazavana sy ireo tombontsoa nomena ny haben’ny fahamaizinana ao amin’ireo izay manda tsy handeha ao amin’ny fahazavana, nefa izy manana ny fahazavana.
Tsy ilain’ny ho heverin’ny olona ho toy ny zavatra feno misitery sy tsy azo faritana mila mijery ny ota atao amin’ny Fanahy Masina. Ny fahotana atao amin’ny Fanahy Masina dia ny fikirizana handa tsy hamaly ilay fanasana ho amin’ny fibebahana. Raha toa ka manda tsy hino an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy ny tenanao manokana ianao, dia tia ny fahamaizinana mihoatra noho ny fahazavana, ankafizinao ny rivo-piainana nanodidina ireo olona mpihemotra tany amèboalohany. Safidinao io rivo-piainana io mihoatra noho ny rivo-piainana izay manodidina ny Ray sy ny Zanaka, ary avelan’Andriamanitra ianao hanao ny safidinao. Kanefa, aoka tsy hisy fanahy ho kivy amin’ny fanehoana izany zava-mitranga izany . Aoka ny olona, izay mikatsaka ny hanao ny sitrapon’ny Tompo tsy hisy hovnoina. Apetraho eo amin’Andriamanitra ny fanantenanao. Efa nasehon’i Jesosy Tompo fa miahy anao amin’ny lanjam-bidy tsy manam-petra izy. Nilaozany ny seza fiandrianan’ny Mpanjaka, nilaozany ny lapany, nampiakanjoany ny akanjon’olombelona ny akanjo maha-Andriamanitra azy, ary maty tamin’ny fomba mahamenatra izy, teo amin’ny hazo fijaliana tao Kalvary, mba hahavonjy anao.